Yaada Bilisaa – Ethipian Press Agency
Imala ministira muummee gara adda waraanaatti
Yeroo waraanni biyyatti danatee hogganaan biyyaa gara adda waraanaatti imalee waraana hogganuun, kallattii kennuun, hamilee humnoota waraanaa cimsuun, degarrsi ummataa akka cimu gochuun biyya keenya keessatti beekamaadha. Mootiiwwan yeroo adda waraanaa dhaqanii...	Read more »
Arjooma dhiigaa lubbuu namaa baraaru
Arjoomni hunduu gatii qaba. Arjoomni gatii hinqabne; kabajni hinkennamneefis hinjiru. Yeroo beelaa arjoomni midhaanii qunnaa tokkoo kabaja guddaa qaba. Yeroo qeyeedhaa buqqa’an namni waanuma qabuun harka namatti hiixate galataan irraa fudhatu. Namni...	Read more »
Oro-Fresh: Biraandii haarawaa, tajaajila haarawaa wajjin
— November 13, 2021 comments off
Jidduu kana Oromiyaan dhaaba tokko eebbisaa turte. Dhaabbanni kun biraandii haarawaan gadi baheera. Maqaan Oro-fresh jedhu moggaafameefiira. Biraandii haarawa qabateera. Maqaansaas ta’e aasxaansaa hawwataadha. Kaayyoonsaas eebbifamaadha. Hojiin dhaabbata kanaa akkuma maqaafi kaayyoo...	Read more »
Maalummaafi kaayyoo labsii yeroo atattamaa
Torban kana taateewwan guguddaa qalbii namaa harkisantu ture. Isaan keessaa tokko labsiin yeroo muddamaati. Manni maree ministirootaa kan mootummaa Federaalawa Rippaablika Xoobbiyaa Kibxata tare labsii kana ummataaf ifa taasise. Labsiin manni marii...	Read more »
Marii waliigalaa: Kan irratti waliigalanii ittin alaa galan
— October 30, 2021 comments off
Osoo ani dhimman torbee kana irratti barreessu soqaa jiruun fuula feesbuukii Gaazexaa Addis Zaman irratti waa dubbise. Dimmichi dhimma guddaadha. Kan dubbates nama guddaafi hayyuu siyaasaati. Anis Dhimma kana irratti osoon amman...	Read more »
Marii walii galtee biyyaaleessaa irratti paartiin kamuu moggatti dhiibamuu hinqabu
Bayyanaa Ibraahimiin Mootummaan Dargii gaafa sirna mootii Haaylasillaasee aangoo irraa ari’ee barcuma qabate sana ummanni biyyattii boqonnaa haaratti ce’uusaatiin osoo gammachuusaa hinxumuriin gocha sirna Dargiitiin gadda cimaaf saaxilame. Gaafas wanti ummata biyyattii...	Read more »
Sagalee Booranaa birmannaa lallabdu Boorana! Angafa Oromoo Abbaa aadaa; duudhaa ganamaa
— October 23, 2021 comments off
Booranni jidduu kana bakka xiyyeeffannaa midiyaa taateeti. Miidiyaan kun oduu misiraachoo miti kan gabaasaa jiru. Hojii misoomaa miti kan gabaasu. Akka dur waa’ee angafummaa Booranaa kan balbalomsituus miti. Dhimma ardaa jilaa, sirna...	Read more »
Akka itti bitatan wallaalanii gabaa abaaruu akka hintaaneef…
Bayyanaa Ibraahimiin Bara sana bara Awurooppaanootni Afrikaa dachee dukkanooftuu jedhanii maqaa doofummaafi gadaantummaa itti moggaasanii itti baacaa turan sanatti, yeroo “waaqni nama gurraacha kan uumeef nama adii akka tajaajiluuf” jedhanii faallaa uumaa...	Read more »
Rakkoowwan sirna barnootaa wajjin walqabatan
“Barrikee hundumtuu bara eebbaa siif haa ta’u; jireenya addunyaa kanaa wajjin wal’ansoo eegaluuf qajeeltee, ilma koo. Ayyaanii Waaqayyoo si wajjin haa ta’u” dhaamsa abbaa mucaasaa jalqabaaf mana barnootaatti ergeedha. “Tokko jennee eegalleeraa;...	Read more »
Mootummaa haaraa wantonni hedduun irraa eegamu
Torban lammaffaa ji’a Fulbaanaa 2014 irraa eegalee biyyattiin ajandaa haaraan qabamteetti. Ajandaan kun ajandaa mootummaa haarawaa hundeessuti. Bu’uurrisaa filannoo 6fa baatii Waxabajjii bara 2013 adeemsisame. Naannolee keessaa Caffeen Oromiyaatu durse. Fulbaana 15/2014...	Read more »